Direct Hire Japan - Kommot Recruitment Agency
प्रत्यक्ष भाडा जापान छिटो र सरल,
कोमोट विश्वको सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा जडान गर्दछ। जापान र विदेशमा घरेलु रूपमा योग्य पेशेवर खोजी गर्नुहोस्। Post jobs for FREE NOW Submit resume in mins NOW पुनःसुरु कसरी सबमिट गर्ने हेर्नुहोस्
हामी को हौं कोमोट विश्व र जापानी मानिसहरु लाई एकैसाथ जोड्न को लागी गरीरहेको छ ताकि उनीहरुलाई जापान मा काम गर्ने नयाँ रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्छ। Kommot मा हामी तपाइँलाई तपाइँको वास्तविक सम्भाव्यता महसुस गर्न मद्दत गर्न खोज्दछौं, जापानमा काम गर्दै, ब्यस्त र अनुभव गर्ने क्रममा ग्लोबल समुदायसँग उत्कृष्ट र सम्पर्कमा आउन।
हामीलाई जागिर छ कि एक आदर्श काम पाउन सजिलो छैन।
तथापि, हामी जान्छौं र विश्वास गर्दछौं कि त्यहाँ सधै सही व्यक्ति हो जसले तपाईको अनौठो प्रतिभा चाहिन्छ।
कामको लागि कसरी आवेदन
हामीले पत्ता लगाउन प्रवाह सिर्जना गरेका छौ
जापानमा एक राम्रो काम सजिलै संग।
ब्राउज ब्राउज गर्नुहोस्
हामीसँग सेक्टरमा रोजगारीको हेरचाहबाट क्षेत्र छ
र होटल सेवा खेती र निर्माण गर्न।
कसैले तपाईंको प्रतिभा चाहिन्छ छिटो र सजिलै संग तपाईंको प्रोफाईल सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको मौका नबिर्सनुहोस्। तपाईँका खाता बनाउनुहोस् हाम्रो दर्जी भर्ती प्रविधिले तपाईंको बिन्दु आवश्यकताहरूको प्रतिक्रिया गर्नेछ।
जापानी श्रम बलमा विदेशी व्यक्तिहरूको शक्ति जापानको लागि आवश्यक छ।
तपाईंको कम्पनीको लागि उद्योगको उत्कृष्ट प्रतिभा कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
कसरी सही व्यक्ति पत्ता लगाउने
हाम्रो विशेष डिजाइन गरिएको समाधान
तपाईंलाई राम्रो प्रतिभा तुरुन्तै लैजानुहोस्।
दर्तामा नि: शुल्क अय्यूब पोष्ट गर्नुहोस्।
आफ्नो जागिर पोस्ट गर्नुहोस् र जागिर खोजकर्ताहरूद्वारा जान्न पाउनुहोस्।
अब पोस्ट गर्नुहोस्
हामी जापानी अनुप्रयोगहरू पनि समर्थन गर्दछौं! जापानको समकालीन कार्य वातावरणमा यस्तो रोजगार पाउन तपाईलाई सहयोग गर्न हामी यहाँ छौं।
उज्जवल भविष्यको लागि प्रगतिमा! People व्यक्तिसँग काम गर्ने अनुभवको बिभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हुन्छ। Inter एक अन्तर सांस्कृतिक वातावरणमा विभिन्न राष्ट्रियतासँग सहकार्य गर्नुहोस्। Your तपाईंको भाषा सीपमा सुधार गर्नुहोस्। के तपाई जापानमा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा काम गर्न चाहानुहुन्छ?
नियोक्ताहरूको लागि कोमोटमा स्वागत छ। दर्ता र नि: शुल्कको लागि नौकरी पोस्ट गर्नुहोस्। सजिलो कार्य मिनेटमा प्रक्रिया पठाउँदै। आफ्नो खाता नियोक्ताको रूपमा दर्ता गर्नुहोस्। Free नि: शुल्क काम पोष्टिंगको लागि क्रेडिट कार्ड आवश्यक पर्दैन। कोमोटमा सामेल हुनुहोस् एक नि: शुल्क नौकरी पोस्ट प्याकेज पाउनुहोस्।
नयाँ ठाउँमा तपाईं कहाँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने परिस्थिति कसलाई थाहा छ?
कसैलाई थाहा छैन, तर के तपाईं मानव भर्तीको बिक्री पोइन्टको लागि बलिदान प्यादा हुन चाहानुहुन्छ?
यो तपाईको जीवन हो, यदि तपाई भर्ती कम्पनीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाई आफैंले रोजगार किन फेला पार्नुहुन्न
र आफैंले नियोक्ताहरु लाई सीधा कुराकानी? "जब म जागिर खोज्दै थिएँ, टोकियोमा जापानी मानव भर्ती एजेन्सीले मलाई सम्पर्क गर्‍यो
सभाको लागि उनीहरूले मलाई टोकियोको एउटा कम्पनीमा पदको प्रस्ताव राखे।
मैले अन्तर्वार्ता दिए र जागिर पाए।
यद्यपि, एक महिनाको लागि उनीहरूको लागि काम गरिसकेपछि मैले सुने कि प्रायः मानिसहरू त्यहाँ छाडे र
केहि नयाँ कार्य स्थानको साथ थियो ...
भर्तीकर्ताले मलाई केहि भने थिएन, वा मलाई लामो अवधिको लागि धेरै आशा नगर्न चेतावनी दिएको थियो।
मलाई लाग्यो कि म एक प्याडेन हुँ जुन मरे पछि समाप्त काममा बलिदान दिइयो। " जाँदा तपाईंको समय खेर फालौं
तपाईं सजिलैसँग बोल्दै हुनुहुन्छ
रोजगारदाताहरु अब हाम्रो सेवा संग।
एक अफ अफ अफ अय्यूब? यदि तपाइँसँग कसैलाई सोध्न एक-अफ अफ काम छ भने, एक अफ अफ अफ अय्यूब प्रस्ताव सिर्जना गर्नुहोस्। Job रोजगारी खोज्नेहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्क। अय्यूब पोस्ट गर्नुहोस्
हामी सधै संसारमा प्रतिभा खोज्छौं।
हामी के गर्छौं भनेर गर्व गर्छौं, हामी विदेशी निवासको सम्मान र हेरचाह गर्छौ।
कोमोटमा सामेल हुनुहोस्